डडेल्धुरा अस्पतालका ४ चिकित्सकसहित ७ जना क्वारेन्टाइनमा
डडेल्धुरा अस्पतालका ४ चिकित्सकसहित ७ जना क्वारेन्टाइनमा कोरोना संक्रमित युवक भन्छन्, ‘कोरोना पोजेटिभ छ भन्दा विश्वास लागेन’
शेर भण्डारी डडेल्धुरा, १० जेठ
डडेल्धुराका कोरोना संक्रमित युवक उपचार गराउन डडेल्धुरा अस्पताल आएको पुष्टि भएपछि अस्पतालका ४ चिकित्सकसहित ७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । शुक्रबार उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–१० का २८ वर्षीय ती युवकमा जेठ ६ गते बिरामी भएपछि उपचार गराउन डडेल्धुरा अस्पताल पुगेका थिए । तर, अस्पतालले उनलाई स्क्रब टाइफस भएको बताएको थियो ।
डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार गराएर ती युवक घर फर्केका थिए । उक्त युवकको स्वाब सकंलन परीक्षणपछि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । स्वाब संकलनमा खटिएका चिकित्सक र अन्य स्टाफहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जगदीशचन्द्र विष्टले जानकारी दिए ।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्टका अनुसार जेठ ६ गते स्वाब सकंलनपश्चात युवकलाई घरमै आराम गर्न सुझाउँदै घर पठाइएको थियो ।
क्वारेन्टाइनमा रहेका ४ चिकित्सक र अन्य ३ जना स्टाफको आज थ्रोट स्वाब संकलन गरिने डडेल्धुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्तले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमित युवकको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालले स्क्रब टाइफस देखिएको भन्दै औषधि दिएर पठाएपछि वैशाख १५ गते घर पुगेर २७ गते जिल्ला सदरमुकाममा आई २८ गते कार्यालयमा हाजिर भएको पाइएको छ । उनी योजनाको सम्झौता तथा अन्य काममा पनि सहभागी भएका थिए ।
तर, संक्रमित युवकले भने कोरोना नहोला भन्ने सोचेर कार्यालयको निवासमा बसेको बताएका छन् । कोरोना पोजेटिभ छ भन्दा आफूलाई विश्वास नलागेको भन्दै उनले आफ्नो पिसिआर काठमाडौंमा चेकजाँच गर्नुपर्ने माग राखेको छन् ।
कोरोना संक्रमित युवक अहिले डडेल्धुरा अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख आशुतोष क्षेष्ठले जानकारी दिए । ‘कोरोना संक्रमित युवकको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । डडेल्धुरा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेका छौँ’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदासम्म यतै उपचार हुन्छ । यदि अवस्था गम्भीर भयो भने सेती अस्पतालमा पठाउने बेवास्था गछौँ ।’
संक्रमित युवक बस्ने आवास तथा चार सरकारी कार्यालय सिल गरिएको डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, १४:३७:००
डडेल्धुराका कोरोना संक्रमितको आशंका : ‘स्क्रब टाइफस'को परीक्षणलाई नै पीसीआर ‘पोजिटिभ’ भने कि
सुदूरपश्चिममा झण्डै २५ हजार व्यक्तिमा कोरोना परीक्षण, २ दिनमा ९ जनामा संक्रमण पुष्टि
डडेल्धुराका संक्रमित अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका बिरामी
मौरासेन सेती हाइड्रो पावरका कामदार बोकेको मिनीट्रक दुर्घटना, ४ जना गम्भीर घाइते
स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, आज हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
घरमा काम गर्ने दुई जनामा कोरोना, करण जोहर आइसोलेसनमा
गुल्मीमा जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कैलालीमा एम्बुलेन्स दुर्घटना, २ जना घाइते